प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न सर्वोच्चमा निवेदन – Nepalpostkhabar
Hemant KC । ११ माघ २०७७, आईतवार १२:०० मा प्रकाशित
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड , नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आइतबार संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको उनीहरूका वकिल गोविन्द बन्दीले लाई जानकारी दिए।
सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैधानिक मानिदैन। संसद विघटनको निर्णय पनि अस्तिसम्म राजपत्रमा छापिएको थिएन। त्यसैले यसको वैधानिकता र आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउँदै उहाँहरूले निवदेन दिनुभएको छ,’ बन्दीले भने।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछिमात्र शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको छ। तर वेबसाइटमा भने शुक्रबारमात्रै अपलोड गरिएको छ।
राजपत्रमा के भएको थियो ?
उक्त निर्णय लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएन। साधारणतयास् सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ।
साधारणत ः निर्णय भएकै दिन यस्तो सूचना प्रकाशित गरिन्छ। राजपत्र छापिएपछि तुरून्तै वेबसाइटमा अपलोड भइहाल्छ।
‘निर्णय भएको एक दिन पनि ढिलो नभई सूचना प्रकाशित हुने चलन छ, एक दिन पछिको मितिमा प्रकाशित गर्ने चलन छैन,’ विभाग एक जना अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
राजपत्रमा कसरी प्रकाशित हुन्छ ?
राजपत्र हरेक सोमबार प्रकाशित हुन्छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। यसको सूचना भोलिपल्टै पुस ६ गते प्रकाशित भएन।
अतिरिक्तांकमा छापिने भनेको प्रायः कानुनहरु हो। किनभने कतिपय कानुनहरू राजपत्रमा छापिएको दिनदेखि लागू हुन्छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरू नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारिक प्रमाणिकरणपश्चात् मात्रै गरिन्छ।
ऐन अध्यादेश वा सन्धि भए कानुन मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा उनले अख्तियारी दिएको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने छ।
तर, यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरू कानुन मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ।
नेपाल राजपत्रलाई प्रकाशनको हिसाबले दुई तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने सरकारी निणर्यलाई प्राथमिकता दिदै मुद्रण विभागले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ।
संख्या (नियमित अंक) ः नियमित प्रकाशन हुने अकंमा ऐन र अध्यादेशबाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका सबै प्रकारका सूचना तथा नियमावलीलाई प्रत्येक हप्ताको सोमबारका दिन प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।
अतिरिक्तांक ः नेपाल सरकारले निणर्य गरेकै मिति उल्लेख गरी सविंधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित जरुरी सूचनाहरुलाई उक्त मितिदेखि नै लागू हुने गरीपछि प्रकाशन हुने राजपत्रलाई अतिरिक्तांक भनिन्छ।